Aragtiyo cusub oo muhiim ah oo ka yimid Google's John Mueller at SMX | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Fikrado cusub oo muhiim ah oo ka yimid Google's John Mueller ee SMX
Fikrado cusub oo muhiim ah oo ka yimid Google's John Mueller ee SMX
Salaasadii SMX, John Mueller, oo ah hogaamiyaha kooxda Xidhiidhka Raadinta ee Google, ayaa bixiyay hadal loogu magac daray "Google Search #2020: Maxaa ku Cusub oo Muhiim u ah SEO-yada." Weli waxaad ka daawan kartaa hadalka baahida loo qabo SMX Virtual haddii aad ku dhaaftay. Mueller wuxuu bixiyay dulmar ku saabsan waxa iska bedelay Google Search sanadkan iyo waxa laga filayo 2021. Kadib waxaan qodnay inta lagu guda jiro Q&A halkaas oo aan ku baranay waxyaabo cusub oo aynaan horay u maqal.
Maxaa iska beddelay Google Search 2020
Mueller waxa uu sharaxay in Google uu si joogto ah u samaynayo isbeddello waxana uu xusay in ay hirgelisay 3,600 oo isbeddel ah 2019 iyada oo in ka badan 380,000 oo tijaabo ah sannadkii.
Google waxa ay bilawday goob Google Search Central oo dib loo summadeeyay si ay u badasho Google Webmaster Central. Google waxay sii waday dadaalkeeda ku saabsan tusmaynta mobilada-koowaad; kama dambaysta ahi waa March 2021. Ogow, Mueller waxa uu ku caddeeyey Q&A in Google ay wali tilmaami doonto boggaga aan saaxiibtinimada lahayn ee moobilka, markaa haddii aanad lahayn goobta mobilada, waad fiicnaan doontaa. Waxa kale oo uu taabtay dhammaan isbeddellada xogta habaysan ee lagu taageerayo dhacdooyinka COVID-19 - waxaa jiray wax badan oo kan, Console-ka Raadinta cusboonaysiinta iyo isbeddellada sannadihii la soo dhaafay. Iyo dabcan, cusboonaysiinta kala duwan ee raadinta Google.
Cusboonaysiinta Khibradda Bogga
Calaamadaha qiimeynta moobilka ee kaliya. Mueller waxa uu sharaxay in Cusboonaysiinta Khibrada Boggu uu soo bixi doono Maajo 2021. Waxyaabo dhowr ah oo aan baranay ayaa ah in qodobkan qiimeynta ah lagu dabaqi doono raadinta mobilada. Waxaan ku waydiiyay Mueller su'aalaha iyo jawaabaha arrintan ku saabsan wuxuuna caddeeyay in gaar ahaan shabakada aasaasiga ah ee muhiimka ah (LCP, FID iyo CLS metrics) ay noqon doonaan calaamadaha qiimeynta raadinta ee mobile-kaliya. Dhinacyada kale ee cusboonaysiinta waayo-aragnimada bogga, sida HTTPS, baadhista badbaadada leh iyo kuwa kale ayaa durbaba calaamado darajo ah ku leh miiska oo way sii ahaan doonaan. Laakin calaamadaha muhiimka ah ee shabakada waxa kaliya oo lagu dabaqi doonaa raadinta moobaylka.
Ma noqon doontaa cusbooneysiin weyn? Waxaan weydiiyay haddii tani ay noqon doonto cusbooneysiin weyn oo la dareemi karo. Wuxuu sheegay inuusan hubin. Mueller waxa uu sheegay in aanu garanayn, laakiin waxa uu sheegay in kooxda baadhayaashu ay ka shaqaynayaan isbeddelladan darajada ah. Wuxuu sheegay in maadaama ay waqti badan ku bixinayaan qiimeyntan, uu u maleynayo inay noqon doonto cusbooneysiin la dareemi karo, laakiin wuxuu sheegay inay adag tahay in la ogaado xilligan.
Qorshaha FAQ dib ayaa loo miisaamay
Google waxa ay ku dartay schema FAQ dib 2019 iyo 2020 waxa ay xoojisay tilmaamaha ku xeeran xogta habaysan. Mueller waxa uu sharaxay in sanadka gudihiisa, Google uu bilaabay in uu dib u milicsado goobaha ay tusi doonaan FAQ-ga natiijooyinka qani ku ah raadinta. Waxa uu sheegay in dadka qaarkii ay si xad dhaaf ah ula socdeen oo ay wax walba ku darayeen, sidaa awgeed Google waxa uu u baahan yahay in uu la doorto cidda ay u muujinayso natiijooyinka raadinta. Google ayaa tan hore u samaysay natiijooyin hodan ah oo hore.
Codso heerka tusmaynta qalabka
Qiyaastii laba bilood ka hor, Google waxa ay si ku meel gaadh ah u hakisay qalabkii tusmaynta codsiga ee Google Search Console. Waxaan moodaynay inay soo noqon doonto hadda, laakiin waa laba bilood ka dib, welina ma soo noqon. Mueller wuxuu noo sheegay Q&A in uu fariimaha u gudbiyay kooxda Console-ka raadinta dhawaan taas oo muujisay sida ay uga xun yihiin bulshada SEO in sifada aan wali la hagaajin. Waxa uu sheegay in kooxdu ay si dhab ah u qaadanayso warbixintan oo uu rajaynayo in ay dib u soo noqoto ka hor dhamaadka sanadkan. Waxa uu intaa ku daray in, "waxyaabo iman karaan oo dib u dhigi karaan arrimuhu," laakiin wuxuu ku rajo weyn yahay inay dhowaan soo laaban doonto. Mueller waxa uu sheegay in uu shakhsi ahaan kooxda ku riixayo in ay xal u helaan.
Kala duwanaanshaha iyo ka mid noqoshada waxay ahayd mawduuc ku xeeran SMX, Mueller wuxuu sharaxay in kala duwanaanshaha SEO ay muhiim tahay. Waa muhiim in laga maqlo dad cusub iyo kuwo kala duwan aragtiyahaas iyo fikradahaas. Waxay kaa caawin doontaa in shabakadahaagu si fiican u shaqeeyaan oo ay u darajo wanaagsan raadinta ayuu yidhi. Gunta hoose, ayuu yidhi Mueller, waa in ay tahay waxa saxda ah in la sameeyo. U fiirso kala duwanaanshaha xooggaaga shaqada, kuwa ku hadla dhacdooyinka iyo ururada taageerada sida Women In Tech SEO iyo UnitedSearch.
Si ka sii badan…
5 Su'aalaha Istaraatiijiyada Warbaahinta Bulshada CMO kasta wuxuu u baahan yahay inuu ka jawaabo 2021
Google Search Console API wuxuu helay xog cusub iyo wax ka badan